'सामसङ मोबाइल किन्ने अधिकांशले २... :: रविन्द्र शाही :: Setopati
'सामसङ मोबाइल किन्ने अधिकांशले २ वर्षसम्म त्यही फोन बोक्छन्'
प्रणयरत्न स्थापित प्रमुख, सामसङ नेपाल
नेपाली बजारमा विभिन्न ५० भन्दा बढी स्मार्टफोनहरुले प्रवेश गरिरसकेका छन्। विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि एक पछि अर्को चिनियाँ ब्राण्डले आक्रामक रुपमा बजार फैलाइरहेका छन्।
विश्व स्मार्टफोन बजारमा अग्रपंक्तिमा रहेको सामसङ नेपालमा पनि सबैभन्दा रुचाइएको ब्राण्ड हो ।करिब ४ महिना अगाडि मात्र ग्यालेक्सी ‘एस ए८’ र ‘एस८ प्लस’ सार्वजनिक गरेको सामसङले दुई दिन् अघिमात्र नोट एट भित्र्याएको छ।
यस फोनको मूल्य १ लाख २ हजार ९ सय ९९ रुपैंयाँ निर्धारण गरिएको छ। यस फोन असोज २४ बाट मात्रै बजारमा उपलब्ध हुने भएपनि देशभरका ब्राण्ड स्टोर र निश्चित रिटेल स्टोरहरु मार्फत प्रिबुकिङ भने खुलिसकेको छ।
दशैंमा मुखमै आएर लन्च गरिएको यस फोनबाट गरिएको अपेक्षा, यसका विशेषता, सामसङको नेपाली बजार हिस्सा लगायतका सन्दर्भमा सामसङ नेपालका प्रमूख प्रणय रत्न स्थापितसँग सेतोपाटीका बिनाेद अाचार्यले गरेकाे संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः
अन्ततः नोट एट नेपालमा सार्वजनिक भएको छ, यसमा रहेको मूख्य फिचर्सहरु के के हुन्?
नोट एट कम्पनी आफेंले धेरै नै मेहेनत गरेको फोन हो। सेभेनमा समस्या देखिएपछि कम्पनीले यसको निमार्णमा धेरै नै समय सजगता अप्नाएर तयार पोरेको छ। विगतको तितो अनुभवलाई भुल्दै यस फोनलाई निकै विशेष बनाइएको छ।
यसै फोन मार्फत सामसङले दुई रियर क्यामेरा (पछाडि तर्फको) निमार्णमा प्रवेश गरेको छ। यसमा १२ मेगापिक्सेलका दुई रियर र ८ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा छन्। यीनमा प्रयोग भएको शक्तिशाली लेन्स मार्फत निकै नै उत्कृष्ट तस्बिर खिच्न सकिन्छ।
त्यस्तै ६.३ इन्चको इन्फिनिटी डिस्प्ले, आर्कषक डिजाइन, एस पेन, एप पेयर, स्क्रिन अफ मेमा, वायरलेस चार्जिङ लगायतका फिचर्सहरु यस फोनका अन्य मूख्य विशेष्ता हुन्।
अन्य कम्पनीले धेरै अगाडि नै दुई रियर क्यामेरा भएका फोनहरु ल्याइसकेका थिए। नोट८ सामसङको पहिलो दुई रियर क्यामेरा भएको फोन बनेको छ। सामसङले अहिले आएर दुई वटा रियर क्यामेराको आवश्यकता महसुस गरेकै हो त?
पक्कै पनि बजार जसरी अगाडि बढिरहेको हुन्छ त्यस गतिमा आफूलाई पनि अपडेट गराउनु वा नयाँ गति दिन सक्नु कुनै कम्पनीको निम्ति निकै चुनौतीपूर्णं रहेको हुन्छ। सामसङले नोट८ मार्फत यी दुबै कुराको सम्बोधन गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ।
दुइ रियर, फोल्ड गर्न मिल्ने फोन र दुई रियर क्यामेरामा कम्पनीले निकै अघि देखि नै काम गरिरहेको थियो। त्यसैले यसको महत्व अहिले आएर महसुस गरेको भन्दा पनि दुई रियर क्यामेराका लागि उपयुक्त समय र मोडल यही रहेको भन्ने कम्पनीले महशुष गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ।
तपाईँहरुको अनुभवमा नेपाली प्रयोगकर्ताले एक चोटी किनेको सामसङको एउटा फोन मोडलबाट अर्कोमा कति अवधिमा ‘सिफ्ट’ हुने रहेछन्?
हामीले यसै विषयलाई मात्र आधार मानेर अध्ययन त गरेका छैनौँ तर विभिन्न रिटेलर पसल, हाम्रा आफ्नै स्टोरहरु, रिपेयर सेन्टरहरु मार्फत प्राप्त गरेको जानकारीका आधारमा औषतरुपमा एक चोटि सामसङको फोन किनेपछि ग्राहकले कम्तीमा पनि दुई वर्ष त्यसको फोन प्रयोग गर्ने गर्दा रहेछन्।
तर अर्को फोनमा सिफ्ट हुनुको कारण फोन बिग्रेर भने होइन्। त्यस अवधिमा बजारमा आउने नयाँ फोनहरुमा उसले हाल बोक्दै आएको फिचर्सहरुको भन्दा अपडेट धेरै कुरा हुनेहुँदा आफ्नो बजेट क्षमता र रुचिकर फिचर्सका आधारमा नयाँ फोन बोक्न पुरानो त्याग्ने रहेछ।
एस८ र एस८ प्लस लन्च गरिएको यति छोटो अवधिमै फेरि उस्तै मूल्य रेन्ज र धेरै समान फिचर्स भएको नोट एट पनि आएको छ। यसले आफ्नै कम्पनीका एक फोनसँग अर्कोले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ता बाँडिने हुँदैन् र?
तँपाईले व्यक्त गर्नुभएको कुरा र सामसङ भित्रका हाम्रा केहि साथीहरुको भाव उस्तै छ। तर म तपाँईहरुले के भन्न चाहान्छु भने यी दुई सिरिज अर्थात एस सिरिज र नोट सिरिजको आ­आफ्नो मह्त्व छ। हामीले यी तीन फोन मार्फत झन् धेरै अप्सन र नयाँ भन्दा नयाँ फिचर्सहरु दिएका छौँ।
एस८ र एस८ प्लसमा भएका केहि फिचर्सहरु नोट एटमा छैनन् भने नोट८ मा भएका धेरै एस सिरिजमा छैन्न। एक प्रयोगकर्ताको रुचि र आवश्यक फिचर्ससँग अर्कोको व्यक्तिको नमिल्न सक्छ।
यसले गर्दा सामसङका आफ्ना प्रयोगकर्ताले झन धेरै अप्सनमा आफूलाई मन परेको फिचर्सहरु भएको फोन किन्ने अवसर सामसङले दिएको छ। यसले अन्तत ब्राण्डको व्यापारमा नै फाइदा पुग्नेछ।
तपाईँहरुले ठ्याक्कै दशैंकै मुखमा फोन सार्वजनिक गर्नुभएको छ। फोनको खरिदमा ग्राहकहरुले के के अफरहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् ?
फोन असोज २४ गतेदेखि मिडनाइट ब्ल्याक (कालो) र म्यापल गोल्ड (सुनौलो) रंगमा उपलब्ध हुने छ। त्यतिबेलासम्म दशैं सक्किसकेको हुनेछ। त्यहि भएर हामीले अन्य कुरामा अफर केन्द्रित गरेका छौँ।यसको बुकिङ भने सोमबारबाटै सुरु भइसकेको छ।
असोज २ गतेबाट असोज २० गतेभित्रमा नेपालभरका सामसङ ब्राण्ड स्टोर र निश्चित रिटेल स्टोरबाट फोन बुकिङ गर्न सकिने छ। अग्रिम बुकिङ गर्न ग्राहकले केबल ५ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै ग्राहकले फोन किन्दा अन्य छुट तथा अफर पनि पाउनेछन्।
ग्राहकले प्रतिमहिना २ जिबिका दरले ८ महिनासम्म एनसेलको १६ जिबि फोरजी डाटा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसका साथै ८ महिनाभित्र सेट फुटेमा शिखर इन्स्युरेन्ससँगको सहकार्यमा बीमा सुरक्षा पनि गरिएको छ।
किस्ता बन्दीमा किन्न चाहनेहरुका लागी हामीले मेगा, ग्लोबल आइएमइ, लक्ष्मी, नबिल र एनआइसी एसिया गरी पाँच बैंकहरुसँग साझेदारी गरेका छौँ ।राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा बैंकहरुको आफ्नै इएमआई नितिका आधारमा ग्राहकले बैंकहरुबाट किस्तामार्फत ६ महिने इएमआइ अन्तर्गत स्मार्टफोन किन्न सक्नेछन् ।
फोन किन्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको हुन्छ उनीहरुले धेरै जसोले यसको लाभ नै उठाउन सकेका छैनन् नि।
हामीले किस्ताबन्दीको सेवा विभिन्न बैंकहरुसँग छलफल गरेरै ल्याएका हौँ। यसको फाइदा ग्राहकहरुले उठाउन चाहेमा उठाउन सक्नुहनेछ तर यसमा राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरुको आफ्नै प्रावधान हुने भएकाले हामीले केहि गर्न सक्दैनौ।
जहाँसम्म सामसङको फोनहरु सहजरुपमा सबैले किन्न सकुन् भन्ने पक्षमा भने हामी आगामी दिनमा यसलाई अझ सहज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पाटोमा ध्यान दिनेछौँ।
तस्बीरहरु: नारायण महर्जन /सेताेपाटी
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ४, २०७४, ०१:३५:१५